Dixie Orange County Ihhotela - Disney California Amahhotela
Ukuze wenze ukubhuka sicela ushayele
ZonkeNK1-Non Ukubhema KingNQ1-Non Ukubhema QueenNQQ-Non Ukubhema Queen Double
Blog Imibuzo Evame UkubuzwaIZENZAKALOCONTACT
Theme Park Amathikithi
Izinto Okumelwe Ukwenze
Izindawo To Eat
LOKHO kwenzeka ukukwenza, kwenze
KAHLE. DO IT kahle kangangokuthi
Lapho abantu bebona ONGAYENZA IT
Ziyofuna ukuba ngibuye
UBONE niphinda futhi.
Ingagcwalisa ukuphila kwakho ADVENTURES,
HHAYI IZINTO. YIBA izindaba Memezelani
Ningakhathaleli impahla ukukhombisa.
The Journey enkulungwaneni
AMAMAYELA KUQALA olulodwa
LIFE IS NOMA A kwakwakhiwa
Adventure NOMA LUTHO
ZAWO ENGCONO ukubona into
UMA THAN ukuzwa ngako
Ukuhleka asiphelelwa isikhathi, NGENGQONDO Ayinakho AGE
FUTHI ngiye ngicabange ... YINI
Usele ONE ukubhukuda AWAY
Ama nbspFROM ajabule
Dixie Orange County kungenye yezindlela ezingcono kakhulu izindawo ukuhlala kungakapheli 15 Kwakuwuhambo lwamakhilomitha engaba Disneyland kanye nezinye ezidumile isigamu intengo. Woza ujabulele nesipiliyoni 5-star on a budget 3-star. Ngeke uzisole.
Rooms kanye Suites
Kungakhathaliseki ukuthi iqembu 2 on a ukubaleka romantic, noma umkhaya 5 on the ultimate Disney eholidini, sinawo ikamelo. Khetha noma yikuphi samakamelo yethu esasisanda kuyilungisa esivumelana nawe nezifiso zakho ojikelezayo.
Kungakhathaliseki ukuthi esikisela lapho ukuya eyodla, ukuhlela zokuhamba yakho, noma nje yathela wena emomotheka, 24 ihora yethu phambi edeskini abasebenzi ukulungele ukwenza ukuhlala kwakho kube lula futhi kujabulise ngangokunokwenzeka.
ekugcineni esizisola kuphela
Angakanani amathuba okuba asithathanga
Umlando omfishane mayelana
I Dixie brand inkokhiso odade ababili kumuntu wesithathu, Dixie, okuphila kwakhe azifinyezwanga okuningi ngokushesha kakhulu umshayeli odakiwe. Looking uphenye ongemuhle ibe eyakhayo, odade ababili ababesaphila wadala ehhotela egameni lakhe ukuthi kubonisa okushiwo ngubani Dixie kwaba ... ethobekile, classy, ​​kwezobuciko, imvelo uyazi, besisa, serene kanye nokunye okuningi.
Thola ongoti bethu sika
ukufinyelela indawo yokubhukuda
FREE yokupaka amabala
Executive King - Rates kusuka $ 59.00 / ubusuku
Queen Double - Rates kusuka $ 69.00 / ubusuku
Thola top Dixie Orange County sika
Wireless Internet Ukufinyelela
Room Service (kungagcini)
Safe Idiphozi Box (front desk)
Esiqandisini & Microwave
top Dixie Orange County sika
Amaphuzu & Izipesheli
Ingabe ukuthanda izinto ozitholayo njengoba nje nithanda ukuhamba? Well ke, ubhekisise! Jabulela amanani ukufika kuma-15% - ukusetshenziswa Ikhodi ukukhuthazwa MEMBER15 uma ukubhuka ekamelweni lakho off amakamelo yethu esasisanda kuyilungisa Suites lapha at Dixie Orange County ngala khetha okunikezwayo:
-AAA Ubulungu Isaphulelo
I-ID kanye ubulungu ikhadi esebenzayo edingekayo phezu isheke-in ukuthola isaphulelo. ukutholakala Limited.
Dixie Orange County ufuna ukuqinisekisa wena nomkhaya wakho uthole amazinga efanayo enkulu ukuthi uthola inthanethi bhuku ngokuqondile ngathi bese ugcine 10%. Ukubhuka ngqo esivumelana futhi kulula futhi ine ayikho enye izimali ezifihliwe okudingekayo nge amasayithi avela eceleni. Vele uchofoze inkinobho engezansi bese SINDISA 10%!
Zonke ukubhuka zihlanganisa:
Kusebenza for ukubhuka inthanethi kuphela. Sebenzisa ukukhuthazwa Ikhodi DIRECT10 lapho senza ukubhuka.
ezithile zonyaka Specials
Yenza lokhu unyaka extra romantic munye nomuntu wakho ekhethekile futhi ukubhuka kwethu Romantic Getaway Iphakheji. Iyatholakala lonke ngenyanga ka-March. Jabulela champagne, ushokoledi, futhi sasekuseni umbhede omunye wethu ethokomele esasisanda kuyilungisa King Suites ngaleso Dixie Orange County. Rates ukuqala at $ 99 / ubusuku futhi zihlanganisa:
-Cozy King Suite ngokuphelele zafanelwa 2
Bottle -TV Champagne
-Breakfast Embhedeni ezimbili
(1 ekuseni ozikhethele)
-1pm Late kua
Yini abantu bathini mayelana nathi
"Ingabe imali tight emhlanganweni umculo futhi wayedinga indawo ukuhlala wayecabanga ukuthi ngeke nihlukane. Ngangineminyaka bajabulile lapho senza egumbini lethu ngentengo. Ngangicabanga ukuthi kwakuzoba yisikhathi, kodwa lalungiswa, zanamuhla futhi zihlanzekile. Kwangimangaza !! "
"Isevisi Friendly kwamakhasimende ngabasebenzi desk front, iduna nensikazi. Babengenza ngizizwe sengathi ngase ngisekhaya. "
"Le ndawo wayehlakaniphe ngempela! !! Esasisanda kuyilungisa, omkhulu imibhede, izingubo zokulala, imicamelo ... konke entsha! Leli gumbi laba kamnandi ahlobisa, mikhulu kakhulu. Bathroom Squeaky ahlanzekile, toilet ethule. Lots of yokupaka. Thola indawo ethule lapho Very. Izilenge eziyishumi ngabantu abamnyama uhlobo out. "
ihlanzekile futhi ethule kakhulu. Vala kubo bonke ezikhangayo, Disneyland kanye Beach. Bekungeke kakhulu batusa le ndawo ukuze wonke umuntu ufuna indawo enhle imali tight. Karl wenza umsebenzi ezivelele zonke izidingo zami futhi eyinakekela kakhulu. Nakanjani vakashela lapha futhi! Kamnandi zalungiswa amakamelo ne microwave kanye esiqandisini. "
"Siyabonga ukuhlala amazing ngempela! izihambi Your kuyinto impela evelele. Saba nezingxoxo konke esasikudinga iseduze, izindawo ukuze badle, Knott sika Berry Farm Disneyland. Izingane kwadingeka ukuvunguza edlala amathoyizi pool. Siyoba emuva godu !! "
Follow us on Facebook FOR Izipesheli
Ungathola WETHU Five Star SERVICE AT zethu ezintathu STAR UDADE impahla IN Hollywood, California. FUNDA OKWENGEZIWE ngezansi bese Book Room YAKHO NAMUHLA!
Xhumana With Us
Izinkundla Submission Ibalazwe
Ukhohlwe iphasiwedi? (Close)
Ufuna Login? (Close)